Oovimba beTshati bemihla ngemihla-Funda ukurhweba
tag: Itshathi yemihla ngemihla
I-AUDJPY ye-Forecast yonyaka-Ixabiso limiselwe ukuPhatha iFomathi ye-Downtrend
Uqikelelo lonyaka lwe-AUDJPY lubonisa ukuba amaxabiso amiselwe ukukhetha ifomati ye-downtrend njengoko inxaxheba yomthengisi kwimarike iqala ukuvuselela. Abathengisi okwangoku bamiselwe ukuba bathathe ulawulo njengoko iinkunzi zenkomo kwiimarike zihlulekile ukuseka ukuhamba kwexabiso ukubuyela kwinqanaba elibalulekileyo le-89.800. Indlela yemarike jikelele kule minyaka ilishumi idlulileyo ibe ngaphezulu kwe-bearish trend kune-bullish enye, kwaye ixabiso limiselwe ukuqhubeka ngakumbi kwifomathi ye-bearish njengoko imarike iqhubeka.
AUDJPY Amanqanaba eXabiso:
Amanqanaba okumelana: 104.700, 89.800
Amanqanaba enkxaso: 72.100, 55.800
Isigaba semarike sisonke saqala xa iinkunzi zaqala ukutyhala ubume bemarike ukuya kuma-104.700 amanqanaba abalulekileyo abalulekileyo, nto leyo eyenza ukuba ibe phezulu. Nangona kunjalo, yaba yindawo eqinile yokumelana, kwaye ixabiso liphinde labuyela kweli nqanaba. Oku, nangona kunjalo, kunikeze impumelelo kubathengisi kwimarike. Ukunyuka kwamaxabiso kuhla ngokuhla kwamandla okuhlawula amatyala ukuhla kunyaka ka-2009. Olu lawulo lunamandla lokuhlawula amatyala lwehlise umgangatho wexabiso ukuya kuma-55.800, elilelona xesha lisezantsi lemarike.
Ukuzibandakanya kwe-bullish emva koko kudlala kwimarike. Njengoko amanqanaba amaninzi angundoqo aphulwa, iinkunzi zenkomo zaqala ukuthatha ixabiso linyuke. Ukusondela kwakhona kubangela ukuphazamiseka. Oku kuthetha ukuba irali yeenkunzi ukusuka kwi-55.800, inqanaba elibalulekileyo, ibikukunyuka njengoko bekusenziwa amaqondo aphezulu kunye namazantsi asezantsi. Emva kokuphumelela kwexabiso elibuyela kwi-104.700 kwiminyaka ye-2013 kunye ne-2015, abathengisi batshintshela kwisenzo ngokubangela ukufuduka phantsi ngaphaya kwenqanaba elibalulekileyo le-72.100. Nangona kunjalo, enye i-rally ye-bullish yaqala ukusuka apha, isilela ukufikelela kwi-89.800, kwaye okwangoku isetelwe ukulandela ifomathi ye-bearish ekuqaleni kwe-2022.
Ukuzibandakanya kwe-bullish kwimarike kubonakala emva kokuhla kwe-bearish kwimarike kwixesha leveki. Isalathisi se-RSI (i-Relative Strength Index) sibonisa ixabiso kwinqanaba eliphakathi njengoko isigaba se-bearish siza kuvela kwimarike. I-Avareji eshukumayo inika enye indlela yokuwela njengezicwangciso ze-bearish ukugubungela intshukumo yexabiso libuyele kwi-72.100 kwinqanaba elibalulekileyo ngo-2022.
Uqikelelo loNyaka lweNZDUSD-Ixabiso lisaxhotyiselwe ukungena kwiBearish Trend
Uqikelelo lonyaka lwe-NZDUSD lubonisa ukuba ixabiso lisaxhotyiswe kakuhle ukuba lingene kwi-bearish trend in the year 2022. Ukunyakaza kwexabiso kuye kwabonakala ixesha elide ngokunyuka kunye neepatheni kwisakhiwo semarike. Sabona iinkunzi zenkomo ziqina kwaye iibhere zabonwa zingena kwi-bearish movement. Nangona kunjalo, ithemba lokuqala lemakethi ekunokwenzeka ukuba lithande ukuthanda kulo iya kuba yindlela yokuthengisa ibhere. Esi sisiphumo samandla kwinqanaba langoku lemarike.
Imimandla ebalulekileyo ye-NZDUSD:
Amanqanaba okumelana: 0.87000, 0.75200
Amanqanaba enkxaso: 0.61200, 0.48900
NZDUSD Ixesha elide Trend: Bearish
Imakethi ye-NZDUSD ithathwa njengelandela i-bearish trend okwangoku njengoko iibhere zilungile kwaye zixhotyiselwe ukunyusela intshukumo yexabiso ezantsi kulo nyaka. I-bearish impact plunge yaqala ukudlala ngo-2009. Kwakukho ukuhla okukhulu kwinqanaba lexabiso le-0.48900. Xa i-bearish downplay iphelile, iinkunzi zeenkomo zaye zathatha ukunyuka kwexabiso ukusuka kwinqanaba lexabiso le-0.48900. Ixabiso, nangona kunjalo, lidibene ukuya kwinqanaba eliphambili le-0.87000, elisekho kwixesha layo eliphezulu.
Imarike yahluka njengoko ixabiso libonwa ukuba liphakathi kwamanqanaba e-0.48900 kunye ne-0.75200, inqanaba elibalulekileyo. Emva kwexesha, abathengisi bazithathele ngokwabo ukuzisa ixabiso eliphantsi kwinqanaba elibalulekileyo le-0.61200. Ixabiso eliphakathi, nangona kunjalo, liqhubekile, kwaye imarike ngoku iyahluka phakathi kwe-0.75200 kunye ne-0.61200 amanqanaba exabiso. Imakethi ngoku ityhala phantsi njengoko ixabiso lisenayo ipateni yoluhlu. Xa isigaba sokuqokelela siphelile, ngoko kufuneka silindele ukuwa okubalulekileyo ngaphantsi kwe-0.61200 kwiinyanga ezizayo.
I-NZDUSD yeXesha eliPhakathi iTrendi: Bearish
Imarike kwixesha leveki leveki ibonisa ukuhamba kwexabiso labathengisi ngendlela ephantsi emva kohambo olude ukuya kwinqanaba lexabiso le-0.75200 ngabathengi. Ixabiso ke ngoko limiselwe ukuba liqhube phantsi kwaye liphule inqanaba elibalulekileyo le-0.61200 xa isigaba sokuqokelela siphelile. I-Parabolic SAR (Stop and Reversal) isalathisi sibonisa ukuba ixesha leveki lisalandela i-bearish trend to rate 0.61200 level.